विप्लवको रणनीति : स्थानीय तहमा सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने – Korea Pati
March 13, 2019 LeaveaComment on विप्लवको रणनीति : स्थानीय तहमा सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने
काठमाडौँ : नेकपा नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि देश तरङ्गित भएको छ । जनयुद्धका सहयात्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लवका नेताहरुले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
विप्लवका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की ‘जीवन्त’ले मंगलबारै सरकारले हठातरुपमा प्रबतिबन्ध लगाउँदै अपराधिक संगठन घोषणा गरेर महँगो निर्णय लिएको बताएका छन् । उनले यो निर्णय देश र जनतामाथिको गम्भीर षडयन्त्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘सामाजिक फासी केपी–प्रचण्ड सरकारले जनताको पार्टी नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ, यसबाट प्रष्टरुपमा देशलाई दलाल बुर्जुवाहरुको सरकारले द्वन्द्वमा पु¥यायो’, उनले मंगलबार भनेका थिए, ‘यसबाट सरकारले दमनमा उत्रने बाटो खोलेको छ, यसको पार्टीले कडा प्रतिवाद गर्छ ।’
त्यस्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सगरमाथा ब्यूरो इन्चार्ज दिपेश बान्तावा राईले सरकारको यो निर्णयबाट देशमा गृहयुद्ध निम्तने चेतावनी दिए ।
सरकारले गृहयुद्ध निम्त्याएको आरोप
उनले सरकारको यो गलत चिन्तन र अरजानीतिक सोचको भण्डाफोर गर्ने तयारीमा पार्टी जुटेको पनि जानकारी दिए । ‘हामी सरकारको यो निर्णयको राजनीतिक हिसाबले प्रतिवाद गर्छौँ’, उनले अन्‍नपूर्णसँग भने, ‘सरकार सच्चिएन भने स्थानीयस्तरमा उसलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउँछौँ, स्थानीयत तहमा सकारको काम रोक्छौँ ।’
नेता दिपेशले विरोधीहरुलाई दमन गर्न राज्य सत्ताले कुनै न कुनै हतकण्डा प्रयोग गर्ने बताउँदै यो पनि अर्को हतकण्डा भएकाले आफूहरुले राजनीतिकरुपमा नै जवाफ दिने बताए । ‘सत्ताधारीहरु दमन गर्ने बहाना खोजिरहेका हुन्छन् । विदेशी शक्तिहरुलाई कारण देखाउन पनि यस्तो कदम चालेको हुन सक्छ ।
वार्ताको प्रस्ताव आएकै छैन
सरकारले वार्ताबाट विप्लव भागेको आरोप लगाएपछि उनले त्यसको खण्डन गरे । ‘सरकारले हामी भागेको भन्ने कुरा सरासर गलत हो । सोमप्रसाद पाण्डेले आधिकारिकरुपमा सम्पर्क पनि गरेका छैनन् । आधिकारिकरुपमा चिठ्ठी पनि पठाएका छैनन्’, राईले भने, ‘अर्को कुरा सोमप्रसाद पाण्डेले हामीसँग वार्ता गर्ने हैसियत राख्दैनन् । सरकारको प्रतिनिधि भनेको मन्त्री हो । सांसदसँग हामीले कसरी वार्ता गर्नु ? त्यो पनि कुनै प्रस्ताव नै नआइ ।’
विप्लवका केन्द्रीय सदस्य दिपेश बान्तावा राई
सरकारले धरपकड गरेमा आफूहरु राजनीतिकरुपमा जवाफ दिन तयार रहेको उनले बताए । ‘हामी राजनीतिकरुपमा भण्डाफोर गर्न तयार छौँ’, उनले भने, ‘सरकारविरुद्ध सबै उपाय अपनाएर प्रतिरोध गर्छौँ ।
सरकारले देशका विभिन्‍न स्थानबाट हतियार बरामद गरिरहेको प्रसंगमा उनले आफूहरुसँग कुनै किसिमको हतियार नै नभएको जवाफ दिए । ‘हामीसँग कुनै छैन हतियार नै छैन, हतियारको जवाफ पनि प्रचण्डले दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सेनाले हामीलाई बुझाएको हतियार पनि प्रचण्ड–बादलले लगिसकेका छन् । उनीहरुले राज्यलाई बुझाए, बुझाएनन् थाहा भएन ।’
नेता दिपेशले सरकार नैतिकरुपमा च्यूत भएको बताउँदै गृहयुद्ध निम्त्याउन खोजेको दोहोर्‍याए । एनसेलको टावरमा आक्रमण गर्न कुनै हतियार प्रयोग नगरिएको उनको जवाफ थियो । ‘एनसेलको टावरमा बम हान्यो भन्ने आरोप पनि हामीमाथि छ । हतियार त दुई लिटर पेट्रोल भरेको बोत्तल पनि हो नि, हतियार भन्दा हामी अहिले दिमागलाई धार लगाउँदैछौँ, हतियार उठाउने कुरा धेरै परको हो ।’
आफूहरु सकेसम्म जनतासँग मिलेर प्रतिरोधमा उत्रने उने बताए । ‘शिवगढी कपिलबस्तुकै शैलीमा हामी देशव्यापी प्रतिकारमा उत्रन्छौँ’, उनलले भने, ‘एकीकृत राजनीति कार्यदिशाले पनि त्यही भन्छ । यो वा त्यो आरोप लगाएर सरकारले हामीलाई उत्तेजित बनाइरहेको छ । होच्याउन खोजिरहेको छ, तर हामी सम्यमतापूर्वक सरकारलाई जवाफ दिन्छौँ ।’
रिब्या भइन् फोटोजेनिक
फेसबुक र इन्स्टाग्राममा के आयो समस्या ? फेसबुक भन्छ- समाधान गर्दैछौँ